✈ Kufuphi neSikhululo seenqwelomoya saseCharleroi. Ihlaziywe ngo-2019. ♥
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJean-François
Ngaba ujonge indawo yokuhlala kufutshane nesikhululo seenqwelomoya saseCharleroi? Ukufika ebusuku kakhulu okanye ukuhamba ekuseni? Emva koko bhukisha indawo yakho yephupha ngoku!
Indawo yakho eMaison Roosevelt igqityiwe kwaye ihonjiswe ngesitayile. Inokuthatha abantu aba-4.
Indawo yakho yokuhlala ikwimitha engama-200 ukusuka kwindawo yokuthenga "iCity Nord", equlathe iivenkile ezingama-70, kubandakanywa neemveliso ezininzi ezidumileyo: C&A, MediaMarkt, Vandenborre, Krefel, Ixina, Cash Converters, Aldi, Lidl, Celio, Veritas, Hema, Casa. , JBC, Pronti, Cuir N°1, Chateau d'Ax, Di, Planet Parfum, Kvik, La Foirfouille, Maxy Toys, Leenbakker...
Indawo yakho ikwimitha engama-500 ukusuka kumbindi weGosselies, kunye neevenkile kunye neeresityu.
Ikufuphi neSikhululo seenqwelomoya saseCharleroi kwaye ikufuphi nemetro. I-tram/metro stop "City Nord" ikumgama weemitha ezili-100 kuphela (umgca wemetro M3). Isikhululo seenqwelomoya sikumgama oziikhilomitha ezi-2. Ukufikelela ngendlela kulula kunye neendlela zokuphuma ezikufutshane (E42, E420, N5). Ukupaka esitratweni kulula kwaye kusimahla.
I-Wifi – i-28 Mbps
4.46 · Izimvo eziyi-65
Indlu ikwimitha ye-100 ukusuka kwi-tramway / isikhululo se-metro "I-City Nord", kwiimitha ze-200 ukusuka kwindawo yokuthenga "i-City Nord" (iivenkile ze-70) kunye neemitha ze-500 ukusuka kwiziko le-Gosselies (iivenkile, iivenkile, iibhanki ... ).
Unganditsalela umnxeba xa kukho imfuneko.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$237
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Charleroi